Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana ao amin'i Mithilesh Singh | Rajani Singh tranga teo amin'ny fiainana taloha izay misy ny famonoan-tena, ny fahatongavan'ny mpianakavy ho nofo, ny teraka ao amin'ny vatana vaovao ao amin'ny vatana vaovao ary ny fitoviana ara-batana - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Mpikaroka: Satwant Pasricha, PhD, Associate of Ian Stevenson, MD
From: Afaka hihemotra ankoatra ny fahafatesana ve ny saina? Volana 2: Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny zava-miafina hafa, avy amin'i Satwant Pasricha, PhD
Ny fiainan'i Mithilesh Singh
Teraka tao Agra, India, tranon'ny Taj Mahal i Mithilesh Singh. amin'ny taona 1975. Ny anaran-dreniny dia Rajwati Devi Singh ary ny rainy, izay niasa tamin'ny asa ofisialy, dia Navratan Singh. Mithilesh dia nanana mpiray tam-po aminy 3, anisan'izany i Meena zandriny vavy, izay akaiky an'i Mithilesh. Mithilesh koa dia nahafinaritra ny nenitoan'ny reniny, Ganga Bai no anarany.
Ny zanaky ny mpianakavy, i Mithilesh no hany olona tsy nanao ny tsara tany an-tsekoly. Mba hanampiana azy handalo ny fanadinam-pianarany farany, nalefan'ny ray aman-dreniny hipetraka miaraka amin'ny fianakaviana iray Virandey Singh, izay zokiny zokiny indrindra ho an'i Mithilesh monina any Bhalaul, India. Ny tetik'asa dia ny hoe nisy mpikambana iray ao amin'ny fianakaviana ao Bhalaul, izay niasa ho mpampianatra tao amin'ny oniversite teo an-toerana, dia ho mpitaiza an'i Mithilesh. Virjiny dia nanambady vehivavy Bimla. Ny renim-pianakaviana, Shakuntala, izay nanana toetra tena manan-kaja, dia tao an-trano ihany koa.
Midilesh dia mifankatia amin'ny ankizilahy ambany
Mithilesh dia tsy faly niaraka tamin'ny fianakavian'ny virjiny tany Bhalaul. Natahotra an'i Shakuntala izy ary nalahelo an'i Bimla, izay tsy maintsy nametraka ny rafozambaviny sarotra. Tena tia an'i Bimla i Mithilesh.
Mahatsikaiky fa i Mithilesh mihitsy no fantatra fa tena latsa-paka sy mafy loha. Ny olana lehibe dia nipoitra i Mithilesh rehefa nifankahita tamin'ny zazalahy iray tao Bhalaul, izay tsy nankasitraka ny fianakaviany noho ny maha-ambany azy. Nanjary kivy i Mithilesh mikasika ny toe-javatra misy azy.
Mithilesh dia nanao ny famonoan-tena
Rajwati Devi, renin'i Mithilesh, ary, Ganga Bai, nenitoany, tonga nitsidika azy tao Bhalaul tamin'ny fiandohan'ny Oktobra 1991. Taorian'ireo telo niverina avy nitaingina kitapo kely iray, dia nandatsaka kerosena teny an-dohany i Mithilesh ary nahatsikaritra ilay ranon-javatra, nandoro ny tenany. Avy eo dia nihazakazaka nankany Bimla i Mithilesh mba hanampy azy. Bimla dia bevohoka tamin'izany fotoana izany ary natahotra noho ny fahitana an'i Mithilesh nihazakazaka nankeo. Bimla, niaro ny tenany, nanindry an'i Mithilesh.
Namono ny afo ny fianakaviany tamin'ny farany ary naka an'i Mithilesh tany amin'ny tobim-pahasalamana akaiky indrindra, izay nahafatesany. Ny vavany dia ngeza be indrindra teo amin'ny lohany, saingy saika ny vatany manontolo no voakasika, ary ny vatany sy ny tongony ihany no voatsimbina. Ny datin'ny fahafatesan'i Mithilesh dia ny volana 6 tamin'ny 1991. Efa 16 taona izy fony izy maty.
Fifandraisana ara-panahy: Nanambara ny nofy i Rajwati Devi
Tao anatin'ny iray volana tamin'ny famonoan-tena nataon'i Mithilesh, i Rajwati Devi reniny, dia nanofy fa i Mithilesh dia hiverina any amin'ny fianakaviany. Tamin'ny 16 1991, tamin'ny herinandro 5 taorian'ny nahafatesan'i Mithilesh, Bimla Singh dia namonjy zazavavy iray, Virender sy Bimla, antsoina hoe Rajani.
Ny firafitry ny sehatry ny firazanana ao amin'ny Reincarnation an'i Rajani Singh
Andro vitsivitsy taorian'ny nahaterahan'i Rajani dia nahamarika marika mena teo amin'ny lohany ny reniny sy ny renibeny paternal. Tao anatin'ny iray volana nateraka, dia nahamarika mena maromaro tamin'ny vatany sisa ry Rajani, na dia marika be aza ny marika eo amin'ny lohany. Tamin'ity fotoana ity i Rajwati Devi Singh, renin'i Mithilesh, dia tonga tany Rajani. Raha nanome ny marika mena teo amin'ny vatany sy ny nofiny i Mithilesh ho tafaverina any amin'ny fianakaviany, dia ahiahin'i Rajwati Devi fa i Rajani no teraka indray tamin'ny maty tao Mithilesh.
Rehefa nianatra niteny izy dia nangataka an'i Seheno i Meena, rahavavin'i Mithilesh. Mifanohitra amin'izany, natahotra mafy an'i Shakuntala izy, tahaka an'i Mithilesh.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Manizingizina i Rajani fa Mithilesh izy & mamerina ireo ray aman-dreniny taloha
Raha vao 4 taona i Rajani, tamin'ny novambra 1995 dia nentina tany an-tranon'ny Navratan sy Rajwati Devi Singh izy. Rajani dia naneho ny fahalalany ny toerana sy ny mpikambana ao amin'ny fianakavian'i Mithilesh. Ny tena manokana, Rajani dia naneho fitiavana an'i Ganga Bai, nenitoan'i Mithilesh.
Rajani indraindray nanizingizina fa antsoina hoe Mithilesh izy ary nilaza fa Navratan rainy ary ny reniny dia Rajwati Devi. Niresaka tamin'ireo mpivady izy ireo, izay ray aman-drenin'i Mithilesh, ho "papa" sy "mummy".
Fiainana taloha ara-batana sy toetra mampiavaka azy
Voamarika fa misy fitoviana amin'ny endriky ny tarehy eo amin'i Mithilesh sy Rajani, anisan'izany ny maso lehibe. Ny toetra mampiavaka ny tena ihany koa dia tsy miova, tahaka an'i Rajani dia mafy loha ary mety ho tezitra raha tsy nandeha tsara izy, toa an'i Mithilesh.
Dr. Pasricha dia nianatra ity tranga ity tamin'ny 1992 ny volana Desambra hatramin'ny volana 1995, izay nandinika mivantana ny fahaterahan'i Rajani, anisan'izany ny faritra iray eo ankavanan'ny lohany izay tsy misy volo ary maivana kokoa ny lokon'ny hodiny. Dr. Pasricha dia nanamarika ihany koa ireo faritra mena izay hita ao amin'ny sorony sy ny lamosiny. Ireo marika mena hafa tao amin'ny vatan'i Rajani izay nanatrika ny fotoana niterahany dia nopotehan'ny 1995.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Voalaza fa i Mishilesh sy Rajani dia nanana endri-javatra tahaka izany, anisan'izany ny maso lehibe. Na dia hita aza ny fitoviana hita ao amin'ny toe-jatovo momba ny fanambadiana, satria i Rajana indray niorina tamin'ny havan'i Mishilesh, dia mety ho nanatsara ny toetrany koa izy ireny.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Mishilesh tia an'i Bimla Singh mianakavy ary navaozina tahaka ny zanakavavin'i Bimla, Rajani, izay manondro fa ny fanahy dia afaka manamboatra ny fahamasinana.
Fiorenam-pirahalahiana: Fotoana fohy taorian'ny nahaterahany dia nampiseho ny fahaterahan'i Rajani izay miseho amin'ny fisainana ny lozam-pandrefesana ao amin'ny vatan'i Mishilesh.
Ny fihenam-bidy: Rajani dia teraka 5 herinandro taorian'ny nahafatesan'i Mishilesh. Raha ny fanahy no tafiditra ao amin'ny fanatsarana ny foetus, dia ny mponina ao Mishilesh koa dia monina ao Rajani ho foetus mandritra ny volana 8 amin'ny androm-piainany. Mino aho fa ny fanahy dia tafiditra amin'ny fampandrosoana ny foetus, satria ny fitoviana amin'ny fisehoana ara-batana dia hita ao amin'ny toe-java-nitranga ao amin'ny vatana, izay hitranga amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy. Ny fomba fomba ahafahan'ny fanahy mamorona endrika ivelany dia resahina ao amin'ny fizarana: Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano
Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny famonoan-tena: Namono tena i Mishilesh, saingy nipoitra indray tamin'ny fianakaviana iray ihany, ka nilaza fa tsy mamarana ny fivoaran'ny fanahy ny famonoan-tena. Azo inoana fa i Mishilesh dia nanamboatra karma avy amin'ny alahelony izay nahatonga ny hafa noho ny famonoan-tenany, izay tokony hamboarina amin'ny fahaterahana indray. Ankoatra izay dia mila miatrika toe-javatra mitovy amin'i Mishilesh i Rajani, saingy manantena i Rajani fa tsy hanao toy izany koa. Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny fiantraikan'ny famonoan-tena, azafady mankany: Famonoana zaza maty tany Ruprecht Schultz
Nahoana ny fanahin'i Mishilesh no monina ao amin'ny vatana faharoa raha mbola velona i Mishilesh? Azo atao ny mihevitra ny fanahin'i Mishilesh hiatrika ireo olana ateraky ny toetrany ary ny mety hisian'ny fohy ny androm-piainany. Araka izany, ny fanahin'i Mishilesh dia nanararaotra ny hanana vatana vaovao indray miaraka amin'i Bimla ho reny, izay tia an'i Mishilesh.
Pasricha, Satwant, Afaka hihemotra ankoatra ny fahafatesana ve ny saina? Volana 2: Fampiantsoana ny vatana vaovao sy ny zava-nitranga hafa tsy hita isa, Harman Publishing House, New Delhi, 2008, pejy 294-298